Hay,ada Samafalka ee SDWO oo Maalintii Ciida ka horeysay raashinkii Fidirga u qeybisay qaar kamid ah Danyarta iyo Agoomihii ay Umada u soo bandhigtey
Hargeisa 12/08/2013) SDWO.COM - SomalilandNews.net) Haayada Samafalka ee SDWO Relief Foundation ayaa waxay Maalintii Ciida ka horeysay u qeybisay Raashin isgu jira, Daqiiq, Bariis, Sonkor iyo Waliba Saliid qaar kamid ah Danyarta dalka gaar ahaan kuwooda nugul ee aan haysan ehel u adeega. Tani iyo intii SDWO Relief Project ay bilowday hawlahan Samafalka ayaa tirada guud ee deeqah na soo gaadhay ay gaadhaysaa $21551.00
Deeqdan raashinka ayaa ahaa Fidridii naga soo gaadhay Qaar ka mid ah jaaliyada ku nool magalada London. Haayada SDWO oo Bishii barakada badneyd ee Ramadaan Fulisay Mashaariic dhowr ah sida Iftaar socday 29kii cisho ee Bishii Ramadaan oo dhan, Ciidsiinta Agoomaha iyo Rajeyda, Qeybinta Deeqaha Raashinada ayaa waxay u soo tabinaysaa dhamaan wallaalaha muxsiniinta ah ee kaalinta dahabiga ah ka qaatey hirgalinta himilada haayada Sawiro muujinaya Sadaqadii ay la baxeen siday u gaadhay dadkii loogu talo galay.
Haayada SDWO oo markasta jecel Transparency ayaa waxay ujeedadeedu tahay sidii ay u qancin laheyd dadka xidhiidhka dhow la leh isla markaana daneeya iney ka qeybqaataan Barnaamijyadeeda Samafalka.
Maaha markii u horeysay ee Haayadu fuliso Mashaariic noocan oo kale ah balse waxaa jiray kuwo noocan oo kale ah kana miisaan iyo muuq weynaa. Waxaanu si qiimo leh ugu mahadcelineynaa dhamaan umada Islaamka ah ee ka soo qeybqaadatey Barnaamijkan kheyriga ah anigoo idinka mahadcelineyna sida wanaagsan ee aydun ugu soo jawaabteen yeedhmadayadii. Haddaanu nahay Maamulka, Madaxda, iyo waliba Masuuliyiinta kale ee Haayada waxaanu Alle idinka baryaynaa Janadiisa inuu idiinku deeqo - aamiin